Mai Chibwe VekwaZimuto: Mukadzi anotya Chombo, Murume anotya chitubu
Kune vanhukadzi vanotya chose chose kupinzwa chombo zvokuti anokwanisa kutoita mukadzi mukuru asina kumboita mukomana, kusiri kuti haadi vakomana asi kuti anotya kupinzwa chombo. PaWeekend apa ndange ndine umwe wechi INDIA ava nemakore 34 achiri mhandara. Anoti iye akazama kuiswa kaviri paupenyu hwake hwese asi zvakamugwadza zvokuti ari kutya kuzamazve. Asi haadi kushaya experience yokuiswa. Saka odii.
Kune chigwere chinohi VAGINISMUS chinokonzegwa nokutya kupinzwa chombo zvokuti pese paunopinzwa chombo unohwa kugwadziwa kukuru chose zvinova zvinokonzera kuti chitubu chisakwanisa kugamuchira chombo. Kugwadziwa kwacho kunokwanisa kuva kwakawanda zvokuti chitubu chinozvisunga kusambovhurika, murume akada kuramba achizama kupinza zvotowedzera kugwadza. Mukadzi anokwanisa kutoridza mhere kunge ari kubatwa chibharo asi iye achitoda kuiswa asi fungwa ichitya kugwadziwa zvikutokonzera kugwadziwa chaiko.
Nyaya iyi inowanikwa munyika dzese hadzo dzepasi rino saka vaya vanokasira kuti ndezvekuroiwa kuti usakwigwa nevarume, dai mambosiya fungwa iyoyo nokuti hazvisi zveuroi. Dai zviri zveuroi, dai zvichingori kwedu chete kuZimbabwe nokuti ndiko kwega kune varoyi.
Chinonetsa nyaya iyi ndechokuti mukadzi anayo anenge achitoitawo zemo zvakangofanana nevamwe. Kuiswa anotoswera achitofunga nazvo uye kutotorisirawo kuti paanosangana nomurume achafarirawo kuiswa, asi kungoti PSYCHOLOGY yake inomuudza kuti kupinzwa zinhu rakakura kudaro kunotofanira kugwadza saka muviri wake wotogadzirira kugwadziwa obva atohwa kugwadza. Kunyorova kuya kwanga kwamboitika nezemo kobva kwapera.
Mukadzi anazvo hapana chaanokwanisa kupinza mukati make. Zvese zvinoita vamwe vakadzi iye haakwanisi kuita:
Kupinzwa zvigumwe muchitamba nomurume
Kuzvipinza TAMBONI yekumwedzi
Kuvhugwa nomurapi kuti atariswe mukati kana achigwara
Zvese izvi haakwanisi kuzviita.
Kana uri murume, unokwanisa kudanana nomukadzi akadai, iri nyaya yokuti iye ane rudo sezvinongoitawo vamwe. Zvinokwanisika kuti muroorane mugozosangana nedambudziko iri maroorana. Zvinokwanisikazve kuti murume anokwanisa kuziva kuti mukadzi wake zvokupinzwa chombo haakwanisi asi nengari yorudo murume oda hake kuroora mukadzi. Mukadziwo anokwanisa kufunga kuti akadanana nomukomana anozopedzisira arambwa nengari yokusakwanisa kuiswa, obva arega zvachose kuita vakomana.
Tinoona vanhu vava vakadzi vakuru asi usina kumbohwa kuti akamboitawo mukomana waaidanana naye. Mapenzi emuraini otoseka vachifunga kuti akatemegwa nyora yokusanyengwa kana kuti ane munyama unoda godobori kuti mbudzi ife. Izvo bodo musikana anongoda kugadziriswa nyaya yake kuti akwanise kuvhurira murume chete chete.
Zvokonzero zvakawanda uye zvimwe zvacho hazvizikamwi. Zvinofungigwa kuti zvinobva pazviitiko zvawakasangana nazvo uri mwanana. Pamwe mai vaikutuka kana vakakuona wakabata pamberi. Pamwe wakamboenda kwamurapi akakutora Temperatura zvokupinza THERMOMETA muchitubu. Pamwe wakambopinzwa zvinhu nevanhu vakuru zvikakutyisa. Pamwe unosemeswa nokuona pameri pako. Pamwe fungwa yako inoti hauna buri rinokwana chombo.
Zvisineyi kuti chii chakakuitisa utye kuiswa, uchaona kuti kazhinji unoda chose kuiswa asi unotya kusvika pakusakwanisa zvachose. Chigwere ichi chinonetsa kugadzirisa. Vakadzi vanacho vanoita ma SPASM mukati kana fungwa ikangofunga kuti pane chinoda kupinda mukati make.
Mazuvano madhokotera ava kuzvihwisisa kuti inyaya yei saka vanokwanisa kukubatsirai. Kana ukaenda kwavari ukatsanangura nyaya yako kuti unohwa sei murume paanozama kukupinza chombo, uchaona kuti madhokotera echikuru anokwanisa kukutsanangurira kuti inyaya yei uye kuti chii chingaitwa pazviri.
Unoda kuenda kuCOUNSELLING. Kana uri kunyika dzakaita se EUROPE kana America, Canada, Australia, ukaudza varapi kuti une dambudziko iri, vanokuendesa kundorapwa. Kana uri muZimbabwe handinatsoziva kuti zvinofambiswa sei. Unokwanisa kuudzwa kuti enda kun'anga kana kuti kuvaporofita asi chokwadi ndechokuti unokwanisa kusvikako ugobatwa chibharo ugogwadziwa zvisingaiti.
Vamwe vanoti kana uchikwanisa kushandisa ma TAMBONI uri wega zvinoreva kuti dambudziko rako unaro hako asi idoko pane evamwe. Unokwanisa kuzvidzidzisa fungwa kuiswa nokujairira kuona vamwe vachiiswa uye chombo chichikwana muchitubu cheari kuiswa achiratidza kuti haasi kugwadziwa. Hino ukaenda kushamwari yako ukamukumbira kuti aiswe uchiona hazvifi zvakaitika. Saka unokwanisa kuzvionera pamafirimu anohi pono.
Kune vakadzi vane dambudziko iri vasingatombokwanisi kuona pono nokuda kwekuti kuona umwe achipinzwa chombo zvinomukanganisa chose fungwa. Zvakaita sokuona munhu achiuraya umwe. Saka zvinohi tanga nokutarisa miniti imwe chete nhasi. Mangwana miniti. Uchingodaro kusvika wokwanisa kutarisa maminiti matatu kana mana. Wochiramba uchidaro kusvika zvisisakunetsi.
Kubata chombo chomurume wako pasina zvokuisana. Kungochibata bata, nokuchijairira. Kuzvipinza Tamboni. Kuzvipinza chigumwe. Kukapera nguva ukajaira unokwanisa kuzoti murume azame kupinza. Asi zvinokwanisa kuita nguva zvichiramba. Murume anofanira kukuterera. Ukati mira omira. Ukati pinza opinza. Zviri nani kusatarisa chombo chichipinda asi kunatsovhura murumewo opinza zvinyoro nyoro mukadzi ambowana nguva yokunyorova kana kuti muchishandisa LUBE
Kana musi waanokwanisa kupinza opinza orega zvokukwesha. Mongoita nyaya iwe uchijairira kuva nechombo mukati. Mosvika pakujaira kungodaro. Kana mozokweshana zvobva kwauri iwe kuti unohwa sei
Vakadzi vakawanda vane chigwere ichi havakwanisi kuchigadzirisa vega.
Hakuna mushonga chaiwo unozikamwa nokuda kwekuti zvikonzero zvakawanda asi kungoti varapi kana vaziva kuti chikonzero chako iwe chii, vanokwanisa kukubatsira asi zvinotora nguva.
Varume vanotya kupinza chombo?
Koitawo varume vanotya chitubu. Variko vakawandisa. Murume anomira chombo uye anoda chose kupinza mumukadzi asi kana akangovhurigwa chitubu anoita buka otadza kupinza.
Zvikonzero zvakawanda asi zvinohi chikuru chazvo kushaya CONFIDENCE zvokuti murume anofunga kuti haakwanisi kugutsa mukadzi. kufunga kwakadai kunokwanisa kukonzera chombo kuramba kumira kana kuti kushaya simba rokunatsomira.
Murume kana ari ega anomira zvakanaka otozvirhoja maoko achinonakigwa nazvo. Kana ava nomukadzi zvomunetsa kukwanisa kupinza chombo. Kana akazoita mukadzi asina njere anotsoropodza murume, nyaya yotowedzera kuipa.
Varume vane chigwere ichi vanotadza zvachose kupinza variko havo asi vashoma. kana uriwe murume ane chigwere ichi tarisa upenyu hwako kubva uri mwanana kuti
1 Wakambobatwa chibharo here noumwe murume
2 Wakambokuvara pachombo here?
3 Une chokwadi here kuti kana uri wega uchifunga nezvokuvatana unozviona mufungwa zvichiitika nomunhukadzi here kana murume?
4 Kana une mukadzi anoda kukubatabata chombo nemawoko chombo chinoramba chimire zvakanaka here?
5 Ko mukadzi akati siya kupinza muchitubu upinze kumashure zvingakuitira nani here?
6 Unotya kuitisa mukadzi mimba here?
7 Unotyiswa nokubika mapoto naye here kwamuri kuita?
Kugadzirisa nyaya yako kunonetsa kuti unoda mukadzi wausingafungiri kuita zviri kuzhe kwemuchato wenyu. Mukadzi anohwisisa uye ane tsika dzakanaka. Kana ukamutsanangurira kuti unohwa sei kana moda kuisana anokwanisa kukubatsira kugadzirisa nyaya nokuti iyewo nyaya ndeyake.
Nyaya dzemishonga panyaya idzi hadzishandi nokuti kana watsvaka mushonga uku fungwa isina kuzvigamuchira, unokwanisa kutozotadza kuisana nomukadzi wako pasina mushonga. Zvoreva kuti wave nhapwa yomushonga wekuti chombo chirambe chimire.
Zvinonzi nevarairidzi. Kana uchikwanisa kupinza chombo chisina kunatsoomarara nokumira, pinza hako nokuti kana chatopinda kazhinji chinowedzera kumira chavamo. Mukadziwo kana une murume akadai, zama kumuwedzera CONFIDENCE yake nokumutaridza kuti kuisana kunonaka uye kuti anogona basa.
Asizve kune varume vasingatombokwanisi kupinza nokuda kwekutya zviri mukati memukadzi. Enda undoona varapi kana uri kunyika inohwisisa nezve PSYCHOLOGY.
Tiudzeiwo kana mune EXPERIENCE yokutya Rudo, Kutya chombo/chituu, Kutya kudanana noumwe munhu. Apa tiri kutaura pamusoro pevanhu vasina zvinoonekera zvakasiyana pavari asi kungoti anotya chete,
Posted by Mai E Chibwe at 15:56